करिष्मा मानन्धरले ओलीलाई फोन गरेको देखिएपछि किन डिलिट गरिन् फोटो ? करिष्मा मानन्धरले ओलीलाई फोन गरेको देखिएपछि किन डिलिट गरिन् फोटो ? Canada Nepal
करिष्मा मानन्धरले ओलीलाई फोन गरेको देखिएपछि किन डिलिट गरिन् फोटो ?
काठमाडौं । नायिका करिश्मा मानन्धरलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर 'प्लस टु'को परिक्षा कस्तो भइरहेको छ भनेर सोधेको खबरले सामाजिक संजाल तात्तिएको छ ।
नायिका मानन्धरले एउटा स्ट्याटस लेख्दै भनिन्, "फोन आउदा मेरो मोबाइल स्क्रिनमा K.P Sharma Oli भन्ने आयो म छक्क परे !! मजाक हो कि भन्ने पनि लग्यो तर वाहा हाम्रो देशको पुर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको आवज सुन्दा घरको मुलिले छोराछोरीलाई गरे जस्तो सुनिन्थ्यो !! आधुनिकता को यो दौडमा सद्भाव र मायाको दुरि मेटाउन येत्रो ठुलो मान्छे भयेर पनि सामान्य कलाकारलाई कल गरिदिनु भयेकोमा धन्यवाद के पि बुवा ।"
करिश्मा मानन्धरले केपी ओलीले आफूलाई फोन गरेर शुभकामना दिएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । तर उनको यो स्ट्याटस विवादमा समेत तानिएको छ । करिश्मा मानन्धरले सुरुवातमा उक्त स्ट्याटससंगै फोनको स्क्रिनशट समेत राखेकी थिइन् जसका कारण उनी विवादमा परेकी हुन् ।
करिश्मा मानन्धरले पोष्ट गरेको फोटोमा केपी शर्मा ओलीलाई आफुले फोन गरेको देखिन्छ । आउटगोइंग (outgoing) को साईन देखिएको प्रष्ट देखिएपछि करिश्मा मानन्धरले उक्त फोटो भने डिलिट गरेकी छिन । फोटो डिलिट गरेपनि आफूलाई किन त्यसरी फोन गएको भनेर देखायो भन्ने थाहा नभएको बताएकी छिन् ।
केपी शर्मा ओलीले आफूलाई फोन गरेको भनेकी करिश्माले फोटोमा आफूले फोन गरेको देखिएपछि किन हतार हतार स्क्रिनशट डिलिट गरिन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अहिले उनको स्ट्याटसहरुमा यही प्रश्न तेर्साउदै कमेन्टहरु गरिएको छ ।
यदी फोनले गलत देखायो भन्ने करिश्माको तर्क सही छ भने करिश्माले किन उक्त फोटो डिलिट गरिन् भन्ने प्रश्न समेत तेर्सिएको छ । के करिश्माले झुट बोलेकी हुन् वा साच्चै फोनले गलत देखायो ? यी प्रश्नसंगै करिश्मा एमाले पार्टी प्रवेश गर्दैछिन भन्ने समेत चर्चा चलेको छ सामाजिक संजालमा ।
आश्विन २, २०७८ शनिवार २२:३२:०६ बजे : प्रकाशित